LEGO အသစ်စက်စက်တိုင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသည်
01 / 10 / 2021 02 / 10 / 2021 Chris Wharfe 697 Views စာ0မှတ်ချက် 10290 Pickup ထရပ်ကား, ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, 10293 Santa's ခရီးစဉ်, ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster, ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်, 40494 ပိုလာဝက်ဝံနှင့်လက်ဆောင်ထုပ်, 40498 ခရစ်စမတ်ပင်ဂွင်း, 40499 Santa's Sleigh, 42131 CAT D11T ဘူဒိုဇာ, 60293 တန့်ပန်းခြံ, 60294 Stunt ပြရန်ထရပ်ကား, 60295 Stunt Show Arena, 60296 ဘီးတန့်စက်ဘီး, 60297 ဖြိုဖျက် Stunt စက်ဘီး, 60298 ဒုံးပျံတန့်စက်ဘီး, 60299 တန့်ပြိုင်ပွဲ, 60309 Selfie တန့်စက်ဘီး, 60310 ကြက်သားတန့်စက်ဘီး, 60311 မီးသတ်တန့်စက်ဘီး, 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block, 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ၇၆၂၃၇ Sanctuary II: Endgame Battle, 76238 Classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ Batman သားလေး, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, Batman, City, Creator Expert, Dc, Disney, Ideas, Lego, Lego Batman, Lego CIty, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego Disney, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego Marvel, Lego ရာသီအလိုက်, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, LEGO.com, Marvel, ရာသီဉတုလိုက်သော, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group
အသစ်စက်စက်တိုင်းရဲ့အပြည့်အစုံကိုဒီမှာပါ Lego အောက်တိုဘာလ မှစ၍ စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသည် ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster သို့ ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block.
ဒါတွေကတိုက်ရိုက်ရောင်းချသူတွေဆီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်တဲ့အတွဲနှစ်ခုထဲကနှစ်ခုပဲ LEGO.com နှင့် Lego ယနေ့စတိုးဆိုင်များသည်ကြီးမားသောလတစ်ခုဖြစ်နေပြီဖြစ်သောပုံမှန်လက်လီအရောင်းအစုများနှင့်အတူ Lego ပြက္ခဒိန်။
သင်၏အကျိုးအရှိဆုံးကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ (ရနိုင်သောနေရာများ) ပါ ၀ င်သည့်အောက်ပါစာရင်းအပြည့်အစုံသို့စာရင်းအပြည့်အစုံသို့ကြည့်ပါ Lego အောက်တိုဘာလတွင်ဘတ်ဂျက်
သုံး အသစ်အစုံ ယခင်လူသိများသည့်ဆောင်ပုဒ်မှ Creator Expert အလုပ်များသောလ၏ခေါင်းစဉ် Lego ပစ်လွှတ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်ယာဉ်၊ ap နှင့်ပါ ၀ င်သည်artment နှင့် Winter Village တို့ကိုရောနှောထားသည်။
10290 Pickup ထရပ်ကား
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft | ပြန်လည်သုံးသပ်
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု (ကျယ်ပြန့်သောထုတ်ပြန်ချက်)
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည်အောက်တိုဘာလ၌ Batmen အဟောင်းနှင့်အသစ်ကို လက်ခံ၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် Tumblers အသစ်နှစ်ခုနှင့်aBatman cowl ကိုအခြေခံသည် classic ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတီဗီရှိုး။
၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown
၎င်းတို့၏မူလနွေရာသီလွှတ်တင်မှုမှနောက်ကျခြင်း၊ Lego CITYStuntz အစုံသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ခေါင်းညိတ်ပြသည် classic part of Lego Rocket Racer နှင့်သမိုင်း
60294 Stunt ပြရန်ထရပ်ကား
2016 ရဲ့သေးငယ်တဲ့ဗားရှင်း 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် သီးသန့် Mickey Mouse minifigure ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော Magic Kingdom ကိုမင်းရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကိုပြသဖို့ပိုစျေးသက်သာပြီးလက်လှမ်းမီတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးထားပါတယ်။
၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် | ပြန်လည်သုံးသပ်
အဆိုပါ 37th Lego Ideas ပန်ကာဒီဇိုင်နာTomáš Letanay ၏မူလသဘောတရားထက် ကျော်လွန်၍ မီးပုံးပျံများခတ်နေစဉ်ပင်မှတ်စုများအားလုံးကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်ကျသော amp တစ်ခုနှင့် 2-in-1 ဂစ်တာကိုပေးသည်။
၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster | ပြန်လည်သုံးသပ်
ဒါတွေအားလုံးဟာမျက်လုံးပေါ်မှာ Marvel Cinematic Universe ခုနစ်ခုနှင့်အတူအောက်တိုဘာလတွင် အသစ်အစုံ အချိန်ကြာမြင့်စွာနှောင့်နှေးသောထာဝရအတွက်နှင့်အနည်းငယ်နောက်ကျသည် Spider-Manအိမ်ပြန်လမ်းမရှိ၊ Avengers: Endgame အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခု
၇၆၁၄၅ Eternals 'လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု
76154 Deviant ကင်းထိုး!
Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155
76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs.
76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ
၇၆၂၃၇ Sanctuary II: Endgame Battle
ခရစ္စမတ်ပွဲကနီးလာပြီ (ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါကိုတိုက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့)၊ ဒီနှစ်ရဲ့ရာသီအလိုက်အစုံတွေကို 40499 Santa's Sleigh ကခေါင်းစဉ်တပ်ထားတယ်။ ဒီတစ်ခုမြန်မြန်ရောင်းထွက်ဖို့မျှော်လင့်ပါ။
40499 Santa's Sleigh
အဆိုပါ Lego စူပါမာရီယို အကြောင်းအရာသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၏အမွေအနှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံနှင့်ထူးဆန်းသောနေရာအသစ်များသို့ဆက်လက်စွန့်စားလျက်ရှိပါသည် စူပါမာရီယို 64 ။
၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block
၎င်းသည်ကြီးသည်၊ အဝါရောင်၊ ၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းကိုသာပြောနိုင်ပါသည် Lego နည်းပညာ အလေးချိန် ၃,၈၅၄ p တွင်ရှိသည်arts နှင့် CONTROL+ လုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ ဒါ့အပြင်ပထမ ဦး ဆုံး နည်းပညာ ဖို့ဒ်!
42126 Ford ကားက F-150 Raptor | ပြန်လည်သုံးသပ်
42131 အက်ပ်ထိန်းချုပ်ထားသော CAT D11 Bulldozer
မူလကလုံးဝဖျက်သိမ်းမည်ဟူသောကောလဟာလများ၊ ဒုတိယမျက်မမြင်သေတ္တာတပ် Bandmates minifigures များကိုဒေသအများစုတွင်မှာယူနိုင်သည်။ LEGO.com ဆောင်ရွက်ပေးသည်။